linenspa 10 intshi inkumbulo Foam kanye innerspring hybrid umatilasi | Rayson
Ngemuva kweminyaka yentuthuko eqinile nesheshayo, uRayson ukhule waba ngelinye lamabhizinisi angochwepheshe futhi anethonya eChina. I-linenspa I-foam yenkumbulo eyi-intshi engu-10 kanye nomatilasi we-hybrid we-innerspring Njengoba sizinikele kakhulu ekuthuthukisweni komkhiqizo nasekuthuthukisweni kwekhwalithi yesevisi, sesizakhele igama eliphezulu ezimakethe. Sithembisa ukunikeza wonke amakhasimende emhlabeni wonke isevisi esheshayo nechwepheshile ehlanganisa ukuthengisa kwangaphambili, ukuthengisa, nezinsizakalo zangemuva kokuthengisa. Kungakhathaliseki ukuthi ukuphi noma yiliphi ibhizinisi ohlanganyela kulo, singathanda ukukusiza ukuthi ubhekane nanoma iyiphi inkinga. Uma ufuna ukwazi imininingwane eyengeziwe mayelana nomkhiqizo wethu omusha we-linenspa 10 inch memory foam kanye ne-innerspring hybrid umatilasi noma inkampani yethu, zizwe ukhululekile ukusithinta.Inamandla athile okuvikela i-UV. Iphumelele izivivinyo ezifanele ngokuya ngendawo yemakethe yokudayisa efana ne-AS/NZS 4399, GB/T 18830, kanye ne-BS 7914.